Ii-FAQs -I-CCIC yoVavanyo Co, Ltd.
I-Fujian CCIC yoVavanyo Co, Ltd.
Isiqinisekiso saseTshayina kunye noVavanyo (Iqela) iFujian Co, Ltd.
Ngexesha Production Ukuhlolwa
Container Ilayisha Supervision
Uhlobo lwenkonzo yokuhlola
Uphicotho lomatshini Ukukunceda ukuba uqonde umthengisi ,kubandakanya amandla omxhasi. Inkqubo yokulawula umgangatho, iinkqubo zolawulo kunye nokusebenza.
Ukuhlolwa kwangaphambili kwemveliso Ngaphambi kokuba imveliso ,uncedo nza kwakho ukuqinisekisa ukuba izinto zokwenza imveliso kunye components will meet your specifications and are available in quantities sufficient to meet the production schedule.
Ngexesha lokuhlolwa kwemveliso (i-DPI) Ukuhlola imveliso ngethuba lenkqubo yemveliso sizama konke okusemandleni ethu ukuze uphephe ezinye iziphene evelayo, Kwakhona ukukunceda khangela ishedyuli imveliso kwaye ahambelane ukuba iimveliso bakulungele xa ixesha mthwalo .
Uvavanyo ngaphambi kokuthumela ngenqanawa (i-PSI) Olu lolona uhlolo kakhulu esebenzayo engqina yonke loo mthwalo kudidi level. Ihlala idinga ukuba imveliso ibe yi-100% epheleleyo kwaye ubuncinci iipesenti ezingama-80 zezinto eziza kufakwa kwiibhokisi Iisampuli ezihlolwe zikhethwe ngokungenamkhethe ngokomgangatho we-AQL.
Ukujonga ukubeka esweni Linyathelo elibalulekileyo ngexesha lenkqubo yokuhambisa, Inokuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zilayisha ngokuchanekileyo kwaye zinciphise nokwenzeka kokophuka. Ukuqinisekisa ngomgangatho olungileyo kunye nemeko yeemveliso zakho ude uzifumane.
Kutheni ndifuna uhlolo okanye uphicotho lwefektri?
Kwimeko yalo naliphi na inqanaba eliPhantsi, ukuthunyelwa okungalunganga, ulwazi olungelulo oluvela kubathengisi ngexesha lokurhweba kwamanye amazwe Ukuhlola yeyona ndlela isebenzayo yokukhusela izibonelelo zomthengi.
Uhlola ntoni ngexesha lokuhlola?
Iimveliso ezahlukeneyo ziya kuba namanqaku ovavanyo awahlukeneyo. Ke ngoko udidi lokuhlola luya kufundwa kwimeko ngononophelo olukhulu phakathi kwabaxumi kunye nomphathi weakhawunti.
Ngokubanzi, apha ngezantsi kukho indawo yokuhlola ngokubanzi ekufuneka ilandelwe:
2. Inkcazo yeMveliso /
Ukuvavanywa 4.Umgangatho / ukuvavanywa
ukumakisha uphawu 6.Umlinganiso wedatha
7.Umgangatho okhethekileyo wovavanyo
Lithini inqanaba lovavanyo?
Uvavanyo oluquka konke kumgangatho oqhelekileyo yi-USD 168- 288 umntu ngamnye kwizixeko ezininzi zase China ngaphandle kweHongkong, eTaiwan. Eli nqanaba liqhelekileyo ligubungela iiyure ezili-12 zomsebenzi ngesabelo ngasinye (kubandakanya ukuhamba, ukuhlola nokulungiselela ingxelo). Akukho ntlawulo yongezelelweyo yokuhamba kwabahloli kunye neendleko zokuhlala.
Uqala njani uhlolo?
Umthengi usithumelele ifom yokubhukisha kunye nencwadi kwiintsuku ezingama-2-3 ngaphambi kwexesha. Nxibelelana noMkhangeli ukuqinisekisa iinkcukacha zovavanyo. Umthengi Qinisekisa isicwangciso sokuhlola kwaye uhlawule. Senza uhlolo kwaye abathengi bafumana ingxelo yokuhlola kwisithuba seeyure ezingama-24.
UFUNA IINKCUKACHA EZINGAKUMBI?
Lwedilesi: Floor 20, No. 75, East Jiangbin Avenue, District Mawei, Fuzhou, Fujian, China